Microsoft Access မှာ Crosstab Query ကို Report ထုတ်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုလေး ထုတ်ရတယ်...
Table တွေ ရှိပြီးသား ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံးလုပ်ရမယ့် အလုပ်က Crosstab Query တစ်ခု တည်ဆောက်ရမယ်... ဟော့ဒီမှာ crosstab query design ကို နမူနာကြည့်ပါဦး...
အဲဒီမှာ OutletID, OutletName, VrNo, NetAmt တွေက Row Heading လို့ရွေးထားတယ်... Stock ဆိုတဲ့ field ကိုတော့ Column Heading ဆိုပြီး ရွေးထားလိုက်တယ်... NetQty ကိုတော့ Value လို့ရွေးလိုက်တယ်... ရက်အလိုက်ရွေးကြည့်လို့ ရအောင် Date ကို Where ဆိုပြီး ရွေးထားတယ်...
အဲဒီ query ကို run ကြည့်မယ်ဆိုရင် အောက်က ပုံစံမျိုးပေါ်လိမ့်မယ်... အဲဒီမှာ Date တစ်ခု လာတောင်းလိမ့်မယ်... 6/27/2007 ဆိုပြီး ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်... အဲဒီနေ့ဟာတွေပဲ ဖော်ပြပေးပါတယ်...
query ကို ပိတ်ပြီး နောက်တစ်ခေါက် ပြန် run ကြည့်ပါဦး... ဒီတစ်ခါ 6/28/2007 လို့ရိုက်ထည့်ကြည့်ပါ... ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ Row Heading လို့ပြောထားတဲ့ OutletID, OutletName, VrNo, NetAmt တွေက data တွေ မတူနိုင်ပေမယ့် ပုံသေ column တွေ အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးပြီး Column Heading လို့ ရွေးထားတဲ့ Stock ကတော့ အဲဒီနေ့မှာ ၁၀-မျိုးရောင်းရရင် ကော်လံ ၁၀-ခု ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ၅-မျိုးရောင်းရင် ကော်လံ ၅-ခု ဖော်ပြပေးတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်... value လို့ ရွေးထားတဲ့ NetQty က ဘယ်နား ရောက်သွားလဲ ဆိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ Stock ကော်လံထဲမှာ ဖော်ပြပေးတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်...
Report အပိုင်းကို သွားရအောင်...
Report အသစ် တည်ဆောက်ဖို့ Create Report in Design နဲ့ ဝင်စရာလိုပါတယ်... အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံအတိုင်း Report Design လုပ်ပါ... ကျတော် အခုသုံးထားတဲ့ coding တွေအတိုင်း သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Label နဲ့ Text box တွေ name ပေးတဲ့ နေရာမှာ Page Header မှာရှိတဲ့ဟာတွေဆိုရင် lblstk1, lblstk2, lblstk3 ပုံစံနဲ့ ပေးရပါမယ်... ကျတော့် report မှာ column ၃၀-အထိ ဖော်ပြနိုင်လို့ lblstk30 အထိ ပေးထားတယ်... Detail ထဲမှာ ရှိတဲ့ Text box တွေကိုတော့ ကျတော်က stk1, stk2, stk3, ..., stk30 အထိ name တွေ ပေးထားပါတယ်... Report footer ထဲမှာရှိတဲ့ text box တွေကိုတော့ tot1 ကနေ tot30 ဆိုပြီး name တွေ သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်...
ပြီးရင် Report design tool bar မှာ code ဆိုတဲ့ button ကိုရှာပြီး နှိပ်ပါ... Option Compare Database ဆိုတဲ့ စာကြောင်းနဲ့ windows ပေါ်လာရင် အောက်က ကုဒ်တွေ ကော်ပီကူးပြီး ထည့်လိုက်ပါ... ဘေးက ကျတော် သိသလောက် ရှင်းပြထားတဲ့ ရှင်းလင်း ချက်တွေကိုတော့ ဖျက်ပြီးထည့်ပါ...
Const conTotalColumns = 30 ' အခု ကျတော့် report မှာ column ၃၀ အထိ အများဆုံး ရလို့ ၃၀ ဆိုပြီး ထည့်ထားတာပါ... ကော်လံ ၁၅-ခု အများဆုံးရရင် 15 လို့ပြင်ပေးပါ...
For intX =6To intColumnCount ' intX =6ဆိုပြီ6းကနေ ဘာဖြစ်လို့ စထားလဲဆိုတော့ ပထမဆုံး ကော်လံ ၅-ခုက အမြဲတမ်း ပေါ်နေမှာ ဖြစ်လို့ပါ... နမူနာမှာတော့ ကော်လံ တစ်ခုကို ကျတော် blank ဆိုပြီးပေးထားပါတယ်...
Me("stk" + Format(intX)) = xtabCnulls(rstReport(intX - 1))
Me("stk" + Format(intX)).Visible = False
Dim lngRowTotal As Integer
For intX =6To intColumnCount ' intX =6မှာ လိုအပ်ရင် ဂဏန်းပြင်ပေးရပါမယ်...
lngRowTotal = lngRowTotal + Me("stk" + Format(intX))
lngRgColumnTotal(intX) = lngRgColumnTotal(intX) + Me("stk" + Format(intX))
'Me("stk" + Format(intColumnCount + 1)) = lngRowTotal
Me("stk" + Format(intColumnCount + 1)) = Null
'lngReportTotal = lngReportTotal + lngRowTotal
Me("lblstk" + Format(intX)).Caption = rstReport(intX - 1).Name
'Me("lblstk" + Format(intColumnCount + 1)).Caption = "Totals"
Me("lblstk" + Format(intX)).Visible = False
DoCmd.Close acForm, "dailyRpt43"
DoCmd.OpenForm "DailyRpt43", , , , , acDialog ' ဒါ ကတော့ criteria မေးမယ့် form ကို ဖွင့်ခိုင်းတာပါ...
If Not IsLoaded("DailyRpt43") Then
Set frm = [Forms]![dailyRpt43]
Set qdf = dbsReport.QueryDefs("rpt_43DSR")
qdf.Parameters("[Forms]![dailyRpt43]![Date]") = frm!Date ' query မှာ တောင်းထားတဲ့ criteria ဆိုတာ form ထဲက သက်ဆိုင်ရာ field ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပါ...
For intX =6To intColumnCount
Me("Tot" + Format(intX)).Value = lngRgColumnTotal(intX)
'Me("Tot" + Format(intColumnCount + 1)) = lngReportTotal
Me("Tot" + Format(intColumnCount + 1)) = Null
ကျန်တာတွတော့ မရှင်းတတ်တော့ဘူးဗျာ... လိုအပ်ရင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ရေးသားကြည့်ကြပါ... ဒီဟာလေးက microsoft.com ကနေရှာတွေ့ထားတာပါ... ဒီလိုမျိုး ရေးလို့ရတယ်ဆိုတာကို ပြောပြပေးတဲ့ နားခိုရာ ဘလော့ ပိုင်ရှင်ကြီး ကို Little Moon နဲ့ မှ NativeMyanmar မှဘော်ဒါများကို အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
နမူနာ ဖိုင်လေးပါ ... http://maunghla.googlepages.com/DynamicReport.mdb
My Label: Access, how to, Crosstab query Report, Dynamic Report
Access how to
မောင်လှရေ...မှတ်ထားဦးကွယ့် အစပြုတဲ့ ပို့စ်တွေကို ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်။ ကိုမောင်လှရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချသလိုနဲ့ တခြားသူတွေကိုလည်း ပညာရစေတဲ့ အတွေ့အကြုံအခြေခံတဲ့ပို့စ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မှတ်ထားလိုက်ပါပြီ။ :) Cheers ကိုမောင်လှ။
ဒါမျိုးလေးတွေကို စာအုပ်ထဲမှာ ရေးထားရင် စာအုပ်ပျောက်သွားရင် ကျန်ခဲ့ရင် ကျတော် မလုပ်တတ်တော့လို့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ မှတ်တမ်းလေးကျန် ဖြစ်အောင် ရေးတာပါ...